REVODE105 bụ otu ụdị nke gbanwetụrụ PLA nke a na-kpọmkwem haziri maka uzo straws.
Njirimara nke REVODE105
PLA resin REVODE105 Testing ụzọ
Njupụta (g / cm3) 1.25 ± 0,05 GB / T1033-1986
Agbaze eruba ọnụego (g / 10min, 190 ℃ / 2.16Kg) 3-8 GB / T3682-2000
Okpomọkụ distortion okpomọkụ (℃) 60
Nkedo shrinkage ọnụego (ukem gbazee eruba direction) 0,005 ISO294-4: 2001
Nkedo shrinkage (vetikal gbazee eruba direction) 0,003 ISO294-4: 2001
Ike ọdụdọ (Mpa) 45-60 GB / T1040-2006
Elongation na ezumike (%) ≥ 10 GB / T1040-2006
Mmetụta ike (King James Version / m2, Izod) 3 GB / T1043-2008
The PLA resin REVODE105 adabara maka nhazi nke na-abụghị okpomọkụ na-eguzogide na uzo ogologo straws, adabara curved straws.
The REVODE105 resin nwere ike esichara na omenala polypropylene (eyi) ahịhịa extrusion ịkpụzi igwe. Mgbe nhazi, biko mara:
M: The nhazi okpomọkụ (kpọmkwem okpomọkụ kwesịrị ka a kachasị):
Ikpo nkebi mbụ (nso oriri akpịrị): 130-150 ℃, ndị ọzọ na ngalaba: 160-180 ℃ PLA resin REVODE105 amalite-agbaze na okpomọkụ n'elu 60 ℃, bụrụ na nke kwa elu okpomọkụ na nri akpịrị na-eduga ná resin agglomeration na unsmooth nri, ọ na-atụ aro ka ọ wụsa jụrụ mmiri n'ime jaket na udia akpịrị ngalaba.
N'ihi REVODE105 ọzọ bụ kenkuwa ka omenala eyi resin, ma nsọtụ nwere ike imebi mgbe ịcha ọjà. Ọ na-atụ aro ịchịkwa mmiri okpomọkụ na mmiri tank n'agbata 35 na 40 ℃, hụ na anwụrụ nwere elu okpomọkụ mgbe ịcha, si otú ahụ zere mfe cracking.
II: Agba agakọ
Ọ bụrụ na ngwaahịa kwesịrị ka a acha, jide n'aka na iji pụrụ iche na agba toner ma ọ bụ PLA dabeere agba ukwu ogbe. Ezighị ezi toner ma ọ bụ na agba ukwu ogbe pụrụ iduga kenkuwa ngwaahịa, unsmooth ngwaahịa elu na ọbụna na-enweghị ike extrude.
Ọ bụrụ na agba agakọ ihe ike ga-eji ruo n'ime 2 awa, na-atụ aro iji 25 kg / bag resin otu mgbe, kama, na-eji ọkara ya ma mechie ọkara nke ọzọ na a na-ekpo ọkụ akara ngwaọrụ ozugbo. The nzube bụ ikpughe ihe ikuku dị ka obere ka o kwere.
REVODE105 ka e site ihicha crystallization, na mmiri ọdịnaya bụ obere than400 ppm. The resin na echekwara na Aluminium foil akpa, na-echebe site igbe ma ọ bụ akpa n'èzí ike ga-eji ozugbo. Nọgidenụ ngwugwu akara ruo mgbe njikere iji na ngwa ngwa reseal ọ bụla ejibeghi ihe onwunwe, ma ọ bụ na resin ga banye na mmiri. Mgbe karịa, na resin wee chee ihe mụbara agagharị n'oge usoro, na ngwaahịa nwere ike kenkuwa property, n'elu shrinkage. Ọ bụrụ na ndị resin kpughere na ikuku nke ihe karịrị otu awa, ọ ga-re-Fikiere n'ihu iji, ma, na resin ike-eji ozugbo. Ekwe omume nke na-adọrọ mmiri ike-ekwe, ma ọ bụrụ na resin kpughere na ikuku na elu mmiri.
Mgbe re-ihicha resin, na un-dehumidified ekpo ọkụ ikuku a machibidoro iwu, n'ihi na enweghị dehumidifier, ọ bụghị nanị na ihicha mmetụta na-apụghị nwetara, ma na-agba nke mmiri absorbance nke PLA resin nwere ike ịrụpụta. The dehumidified ikuku nwere ike ekwe nkwa na ihicha mmetụta nke PLA resin na desiccator. Mgbe na-eji n'ozuzu oven, ndị dehumidification ngwá ga-eji na-dehumidify ikuku na oven.SD-H usoro nke n'ụgbụgbọ mmanụ aṅụ-wheel-ụdị dehumidifiers ọnọ site Shini Pla stics Technologies Inc. na-ike na-atụ aro maka PLA ihicha, ndị ọzọ equipments na otu dehumidified mmetụta nwekwara ike họrọ.
Ahụkarị ihicha ọnọdụ na-ẹwụtde ke okpokoro n'okpuru:
ihicha oke ahụkarị Settings
Obibi Time (awa) 2-3
Air okpomọkụ (℃) 80 (okpomọkụ nke nkịtị oven)
Air igirigi Point (℃) -40 (okpomọkụ nke dehumidifier)
Air Flow Rate (m3 / Ọrụ Nchịkwa-kg resin) > 1,85
Mechie itunanya na ala nke hopper na kpochapu ihe gbọmgbọm mgbe mechisịrị ọnụ ala igwe maka obere oge (n'ime 30 min), na-ezere igbochi nke na ndepụta akpịrị. Mepee itunanya na-eri nri resin mgbe ikwado re-amalite ogwu ogbugba.
Ọ bụrụ na agba mgbanwe na decomposing mere n'oge n'ịkpụzi usoro, kpochapu ihe gbọmgbọm ozugbo iji na-edebe ihe ala nke ihe onwunwe. Nọgidenụ na-na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na ihe nkịtị, ma ọ bụ kpatụ kwa.
Recovery ọgwụgwọ nke mmeghari ihe:
The erughị eru ngwaahịa na-emepụta na revode105 mmepụta usoro nwere ike esichara na esichara ọhụrụ materials.The nkezi nke mgbakwunye ekwesịghị oke buru ibu, ma na ngwaahịa ga-adị oke kenkuwa.
The recycled ihe nwere ike a na-emeso ndị na-eso ụzọ abụọ:
Na usoro nke mmepụta, ọ bụ ozugbo comminuted na ekekpepde ka ndị hopper site akpaka feeding.The ọhụrụ ihe onwunwe bụ mbuaha ojiji, ma mkpa iji hụ na ịwụ okpomọkụ bụghị elu karịa 60 degrees, ma e nwere ike ịbụ nnyapade ihe onwunwe ( atụ aro mode ojiji)
Next: 60gsm White Kraft Akwụkwọ Roll N'ihi Akwụkwọ ahịhịa
Anti Counterfeiting Hologram Eriri
Automatic tutpik mbukota Machine
Baby nti nhicha
ere ure Plastic raw ihe
ọnya akara mbukota Machine
Cotton nti Buds
owu swab ruo
nke nti nhicha Stick Cotton Bud
na-emebi emebi Label
enyi na enyi ihe
letus mbukota Machine
Natural / buff Agba
Ohiri Isi mbukota Machine Price
Pla resin N'ihi Ọgwụ mezuwo
Pla resin Na High ike
Plastic Stick owu swab
p kpara Fabric
raw Wood pulp katọn Gray
Single tutpik mbukota Machine
spak plọg nkwakọ Machine
N'ogbe ahaziri Printing
Osisi Plastic Stick owu swab